जाकार्ताबाट उडेको विमान समुन्द्रमा खस्यो ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/जाकार्ताबाट उडेको विमान समुन्द्रमा खस्यो !
२५ पुस, काठमाडौं । इण्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट उडान भरेको केही समयमै सम्पर्कविहीन भएको विमान समुन्द्रमा खसेको आशंका गरिएको छ ।
श्रीविजया एयरको बोइङ ७३७ जाकार्ताबाट वेष्ट कलिमनतन प्राप्तको आकासमा पुग्दा सम्पर्कविहीन भएको थियो । २६ वर्ष पुरानो यो विमानमा ६२ जना सवार थिए । ५६ यात्रु थिए, जसमध्ये ३ शिशु र ७ बालबालिका छन् ।
दुई पाइलट र चार चालक दलका सदस्य थिए ।
फ्लाइट राडर २४ का अनुसार विमान एक मिनेटभन्दा कम समयमा १० हजार फिट तल झरेको थियो ।
त्यहाँको नेशनल रिसर्च एण्ड रेस्क्यू एजेन्सीका अधिकारीहरुले भने दुघर्टना स्थल पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । समुन्द्रको एक स्थानमा अवशेषहरु भेटिएको स्वीकार गर्दै एक अधिकारीले भनेका छन्, ‘समुन्द्रको गहिराई २०/२३ मिटर छ, हामी आज रातसम्ममा दुर्घटना स्थल पत्ता लगाउँछौं ।’
कोरोनाभाइरस महामारीको केन्द्रका रुपमा चिनिएको चीनको वुहान शहरबाट पूर्ववत रुपमा आन्तरिक उडानहरू सुरू भएको छ।